Ururka EPRDF Oo Soo Dhaweeyay Go'aanka XDSHSI. - Cakaara News
Ururka EPRDF Oo Soo Dhaweeyay Go'aanka XDSHSI.
Jigjiga(CN) Talaado.Jan.13.2015, Sida lawada ogsoonyahay waxaa lagu jiraa xili loo diyaar garoobayo doorashadii 5aad ee deegaanada iyo dalka ee 2007-da T.I. taasoo ay xisbiyadu kumashquulsanyihiin xulashada musharixiinta.
Shir ay yeesheen gudiga fulinta ee xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ayaa waxay go'aamiyeen in ay xildhibaanada deegaanku ay noqdaan boqolkiiba 35 dumar, islamarkaana heer federaal ay noqdaan haweenku boqolkiiba 40-tan oo kadhigan 24-tii xubnood ee xukuumada deegaanku kulahayd baarlamanka federaalka in ay 10 kamida dumar noqdaan.
Waxayna goa'aankan bordhiga doorashooyinka qaran ee Itoobiya iyo Ururka EPRDF kutilmaameen goa'aan geesinimo leh oo uusan abid horay u soomarin deegaanku. Iyadoo ay hada kahor xubnaha xildhibaanada heer deegaan ay 3 dumar ah kaga jireen halka xubnaha federaalka ee deegaankuna aysan kujirin wax dumar ah.
Go'aankan ayaa noqonaya mid doorka haweenka ee deegaanka sii dardar galin doonta iyadoo shirkii u danbeeyay ee EPRDF lagu amaanay deegaanka guulo badan oo uu kasoo hoyiyay dhanka horumarka iyo nabadgalyada. Gaar ahaan dhanka haweenka waxaana kamid ahaa deegaanka Soomaalida Itoobiya oo noqday deegaankii ugu horeeyay ee ay gabadh kanoqoto madaxwayne kuxigeen.